Allgedo.com » Gudoomiyaha Baarlamaanka TFG Shariif Xasan Sheekh Aadan oo maanta isku soo sharaxay xilka madaxweyne nimada.
Home » News » Gudoomiyaha Baarlamaanka TFG Shariif Xasan Sheekh Aadan oo maanta isku soo sharaxay xilka madaxweyne nimada. Print here| By: allgedo.com:
3 Jawaabood Gudoomiyaha baarlamaanka TFG ee xilligiisa gaba gabada yahay ayaa maanta shaaca ka qaaday inuu isku soo sharaxay xilka madaxtinimada Soomaaliya ka dib munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho.
Munaasabadaan oo ay kasoo qeyb galeen dadweyne aad u badan ayaa mar uu halkaasi ka hadalay Shariif Xasan waxa uu tilmaamay in maanta wixii ka dambeeya uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan inay qabtaan xilka madaxtinimada Soomaaliya.
Sidoo kale waxa uu sheegay in hadii la doorto uu dalka wax badan ka qaan doono, sida waxbarashada, dhaqaalaha, dib u dhiska iyo arimo kale oo aad u badan.
Ugu dambeen waxa uu ka codsaday dhamaan xildhibaanada baarlamaanka cusub ee lasoo dhisi doona inay codkooda ugu shubaan si uu u helo xilka madaxtinimada.
Shariif Xasan Sheekh Aadan waxa uu ka mid yahay xubnaha ku eedeesan inay musuq maasuqeen qarashaad aad u badan waxaana xubnahaasi sidoo kale ka mid ah Madaxweyne Shariif iyo Ra’iisul wasaare Gaas.
Gudoomiyaha Baarlamaanka TFG Shariif Xasan Sheekh Aadan oo maanta isku soo sharaxay xilka madaxweyne nimada. " Keerow Eyle says:	August 12, 2012 at 2:17 pm	Shacabka Somaliyed waxaan uga digeynaa ineysan doranin Madaxda TFGda guud ahaan , gaar ahaan XARIIF SAKIIN maxaa yeeley wey ogsoon yihiin waxa ay yihiin iyo danaha ay ka leeyihiin Dawladnimada iyo Maqaamka Siyaasadeed.
Ugu dambeyntii XARIIF XASSAN waa eedeysane lagu soo eedeeyey Xatooyo Hanti Qaran oo ay Kooxda daba galka UNka si cad u soo caddeyeen Jeegagii uu Xadey iyo Xisaabaha uu ku shubtey , eedeyntaas oo weli taagan miyaad rabtaan inaad doorataan XARIIF XASSAN ? KKKKKK Haddii ay taas idinka suurtowdo WALLAAHI BILLAAHI WAXAAD NOQONEYSAAN MUNAAFAQIIN oo ka furtey ILAAHEEY iyo DIINTA ISLAAMKABA, idinkoo ogsoon in MUNAAFAQA uu galaayo qeybra ugu hooseeyso ee NAARTA , Allaha naga bad baaditee, Somaliyey indhahiina wax ku arka, dhegahiinana wax ku maqla.DULMIGANA SI TOOS AH ULA DAGAALLAMA.
farax says:	August 12, 2012 at 5:28 pm	Subxaanalaahi
Walaalow comment waa dhaafeen waxaas aa qortay ee wax la har, meeshaan kama muuqdaan kuwa Ahlu badar ehe.
Tan labaad xoogaa Asharaafta ma hubaysno miyaa maxaa saas loogu lafajebinaa shariifka.
Waad aragtaa , Shariif Tooxaw, cabdi weli, Tuganimi meshay ka gaaree,
Waa wada ognahay Farmaajo -kaabo laadaraha ugu wayn inuu yahay uu xitaa Aqalka Senateka kla la yiri hala soo xiro isagaa USA passaport sito, hadana Dhawaan xitaa lasooo wado Lacag uu ka xaday Safaraddii somalida ka hor buruburkii, waxaa kasii daran Cadow -jab kama daale , bisnka waxaw lacag xaday hadaad arki lahayd, maxaa miskiinkaan AAla baytka ah xoogaada siyaaradaa ee la siiyay loogu jeedaaa.
Abdi shakuur -soo hoyde kkkkk, ka daran– Salaad Cali Jeele aaba sisharaxay, Xasan shiikh oo ilmihii SIMAD Iidaale geeyay -ilaahaw adaa dulqaad badan maxaa aakhiro war jiro, Afgaduud ama Tooxaw kaas aakhiraba lala sugi maayee usoo fiirsada intuu addunyo joogo tan ku dhacdo mar dhaw yaa layataniii hadadysan ka gaarin.
Akhyaarta xoogaa Asharaafta haloo dabciyo -yaan si gaaara loo weerarin yaa waa aalabayt iska jira…..yaaaa
Jamac Qowdhane says:	August 12, 2012 at 6:07 pm	Xusuuso hadad xis leedahay. Shariif Xasan Shiikh Adan, waa ninki isagoo sadanad heysta oo ah Gudoomiyaha Baarlamaanki Mbeigati lagu doortay 2005 ka dhiidhiyay duliggi ay Amaxaardu ku heysay dowlad ku sheegti Baydhabo lagu ilaalinayay.
Soomaaliyey dib u jaleeca geesinimaddi iyo wadaniyaddi ninkaasu ku sifoobay marki uu Baydhaba ka soo tagay oo uu Xamar ugu yimid Maxaakiimta islaamka; halkaas oo uu halgan naftii hure ah uu ka bilabay.
Horta qabo Shariif Xasan ee bal qof kale ku soo dara.